Wheelchair Seating System - S-Shape Kugara
Yedu S-Rakaumbwa Seating System inopa akawanda mabhenefiti pamusoro peyakajairwa manyorerwo wiricheya chigaro. Haingori chete kuti kumanikidzwa kunogoverwa zvakaenzana pamakumbo nekumashure, inopawo pekugara pakadzika uye inodzivirira kumberi kutsvedza. Nyika yekutanga S-Yakaumbwa ergonomic zvigaro yakagadzirirwa zvakananga kunyaradzwa uye ergonomics. Iine anopfuura makumi maviri nemaviri patent uye yakatangwa seGlobal Chigadzirwa, ichi chigadzirwa chakasarudzika chinokwanisa kudzikamisa kumanikidza, kudzikisira kutsvedza uye kusimudzira kumira kwakanaka.
Ese edu maS-ERGO mafuremu ANOEDZWA. Uku kupokana kwakasangana neUltralight Kurema, Ergonomics, uye Kuchengeteka mupfungwa uye neyakaguma chigadzirwa ichigadzika bhawa yepamusoro unhu zvinogoneka. Dzidza zvimwe zvakasarudzika mamakushini anorapwa ne AEIGIS® kupa iyo anti-microbial yakavharwa zvigaro sisitimu. Zvakanakisisa zvezvakanakisisa mavhiripu zvakagadzirirwa iwe chete nekuti iwe wakakodzera.
Ergonomic mavhiripu ine S-Yakaumbwa Kugara